Shiinaha Full Steel Dome Head Blind Rivet warshad iyo soosaarayaasha | Yuke
Full Steel Dome madaxa rivet indha la 'waa isku xira bir ah oo leh qaab dhismeed u gaar ah iyo xoog soo saarid sare, wuxuuna ka tirsan yahay qeybaha cusub ee dhejinta. Waxay leedahay xoog sare oo jilib iyo xiirid ah.
Dhammaystirka dusha: Zinc dahaadhay / Zinc plated
Tafaasiisha Dome Head Blind Rivet
Nooca Shirkadda: Soo-saare
3. Codsiga: wiishka, dhismaha, qurxinta, qalabka guryaha, warshadaha.
5.Awood Wax soosaar: 500 Tan / Bishii
7.Origin: WUXI, Shiinaha
8.Luuqadda: Remaches, Rebites
9.QC (kormeer meel kasta ah) Is-baarid iyada oo loo marayo wax soo saar
1. Si fiican ugu shaqee sheyga jilicsan. sii dusha sare ee wax lagu dhejiyo.
2.Provide dusha sare ee dhalista si aad ugu xirto qalab jilicsan oo jilicsan iyo godad aad u weyn.
Dhexroorka flange -ka oo kordhay wuxuu ilaaliyaa sharafta arjiga.
1.Waxaan nahay warshad, sidaa darteed waxaan u madaxbannaan karnaa wax soo saarka wax soo saarka, wakhti kasta, meel kasta oo ay tahay, waxaan ku siin karnaa badeecado adiga kugu habboon.
2. Inta lagu gudajiro qiimaha warshadda, waxaad keydin kartaa lacag badan si aad u iibsato alaabo badan.
3. Tayada ayaa la hubiyaa, waxaan haynaa qalab kormeer buuxa.
4. Warshadda booqashada si diiran ayaa loo soo dhoweeyaa, ka dib, araggu waa aamin.
5. Muunad ayaa lagu bixin karaa bilaash.
6.Over 10 sano waayo-aragnimo ah ee soo saarista, shaqaale xirfadlayaal ah, sumcad aad u fiican oo naga dhigeysa inaan sii wadno fasalka koowaad.
Hore: Aluminium Aluminium Dhoobo Madaxa Indhoole
Xiga: Qalabka Aluminium ee Qumman ee Buuxa